कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: एक्लोपनको साथी —मिनर्वा बज्राचार्य
एक्लोपनको साथी —मिनर्वा बज्राचार्य
संगीत कला पनि मानविय जीवनको अभिन्न अंग हो भनेर धेरै मानिसहरुले अगाली रहेका छन । संगीत आनन्द मात्र नभई विरामीहरुको निम्ति थेरापीको रुपमा लिने गरेका पनि पाइन्छ । संगीतमै आफ्नो जीवन समर्पित गर्दै आउनु भएकी गायीका मिनर्वा बज्राचार्य संगको छोटो सम्वाद
१.तपाईं किन संगीत कला क्षेत्रमा लाग्नु भयो ?
— टेन्सन मुक्त क्षेत्र नै मेरो लागि संगीत कला क्षेत्र हो । एक्लोपनको साथी पनि हो ।
२. संगीत कला के हो ?
— मन भित्रका वेदनाहरुलाई केहि समय मन हलुका पार्न संगीत कलाले साथ दिएको पाईन्छ । एक प्रकारको अदृश्य शक्तीको औषधी जस्तो लाग्छ । भनिन्छ औषधीले निको पार्न नसकेको विरामीलाई संगीत थेरापीले निको पारेको पाइन्छ ।
३.तपाईं संगीत क्षेत्रमा लागेर के पाउनु भो ?
— आत्मा सन्तुष्टीको साथ श्रोता तथा दर्शक माफ परिचित हुने मौका पाएँ । भनिन्छ कर्म गर्नुपर्छ फलको आसा गर्नु हुँदैन ।
४. सगीतकलाबाट कुन बेला हर्षित हुनुभयो ?
—प्रतिभाको खोजी २०७७ मा भाग लिएँ, छोटो समयमै हजारौ वश्रोताहरुको भिवर्सबाट दुवै भाषामा सर्वोत्कृष्ट भिवर्स पाउन सफल भएँ । दुवै भाषाको एवार्ड एउटै कार्यक्रमबाट जित्ने र्माका पाएँ । यहि मेरो जीवनको पहिलो उपलब्धी हो।
५. संगीतकला सरस्वतीको वरदान हो कि रियाजको परिणाम हो ?
— वास्तवमा अभ्यासनै संगीत कला कर्म हो । सरस्वतीको आराधना विना संगीत कला श्रृजना हुँदैन होला ।
६. घरको कामकाजबाट पन्छिन महिलाहरु संगीतमा लाग्छिन भनिन्छ साँचो हो ?
— भन्नेहरुले भनिन्छ होला । म घरको काम सकाएर मात्र संगीत साधना गर्छु । गृहणीबाट पन्छिएर होइन ।
७. तपाईं कस्को देखासिकीमा गीत गाउनु हुन्छ ?
—म कसैको देखासिकीमा गीत गाउन थालेको हैन । पहिलो त बुदिंया भिन्तुना म्ये कासाबाट गायनमा शुभारम्भ गरेकी थिएँ ।
८. यहाँलाई कस्तो गीत मन पर्छ ?
— मलाई सन्देशमुलक गीत मन पर्छ । जुन गीतले समाजमा जनचेतना प्रवाह गर्न सकोस ।
९.गोजीमा पैसा भएपछि जोसुकै गायक, गायीका बन्न सक्छ रे हो ?
—पैसा हुँदैमा गायक गायीका हुन सक्दैन, शीप, प्रतिभा हुनु जरुरी छ । मैले पनि पदम रत्न क्याम्पसमा गायन विधामा स्नातक गर्दै छु ।
त्याग तपस्या र बलिदान विना कुनै कार्य सफल हुँदैन । संगीत कलाक्षेत्रमा पनि सतकर्मको साथ अगडी जानु पर्छ । तपाईंको पत्रिका मार्फत मनको कुरा राख्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो । कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद
कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक अंक ४७२ मिति २०७७ मंसिर २४ गते प्रकाशित
Posted by kirtipur.com.np at 3:30 PM
Praveen Joshi January 29, 2021 at 6:57 PM